Ihe ndị dị mkpa maka uwe ejiji ndị inyom
A na-ekewa uwe ejiji nke onye ọ bụla fashionista n'ime ụzọ abụọ - isi na mgbakwunye. Ọ bụrụ na mgbakwunye ndị ọzọ na-agụnye ụdị uwe na ngwa ndị na-adịghị mkpa dịka ha na-emeju ọchịchọ nke ụdị aghụghọ, uwe nkwekọrịta bụ isi bụ ihe na-enye nwa agbọghọ ahụ ihe ndabere nke ntọala niile. Ntọala a nke uwe ụmụ nwanyị kwesịrị inwe àgwà ndị dị ka ihe dị irè, ọhụụ, ihe dị mma, ma, n'ezie, ụdị. Taa, stylists nwere ike ịgbakwunye ndị na-emepụta ejiji ihe osise dị mkpa maka nwa agbọghọ kwesịrị ịbụ.
Nke mbụ, ị ga-achọ inweta uwe ndị a pụrụ iji mee ihe n'ọnọdụ ọ bụla dị mkpa. Ihe ndị dị otú ahụ kwesịrị ịdị jụụ ma ghara ịchọ oge dị ukwuu iji mepụta ihe oyiyi dị mma. Ihe nkpachi maka nwata nwanyị kwesiri itinye akwa ejiji di ocha nke eji eme ihe di iche iche, ihe ndi mmadu mara mma na ihe ndi ozo. Njikọta nke ihe ndị dị otú a ga-enye gị ohere ịchọta ihe eji eme ihe ma n'otu oge ahụ nwee obi ike.
Tụkwasị na nke ahụ, uwe ejiji maka nwanyị kwesịrị ikwe ka ịmepụta ozugbo ihe oyiyi ahụ n'ụzọ ọ bụla. Ya mere, ndị na-emepụta ihe na-adụ gị ọdụ ka ị nwee ụlọ ahịa gị, uwe ejiji na jaket ma ọ bụ jaket na ụdị ụlọ ọrụ. A na-eyi uwe ndị a dị ka nzukọ azụmahịa, nri abalị ma ọ bụ nnyefe ndị ọrụ nchịkwa, na-eyi uwe dịka nhọrọ kwa ụbọchị.
Uwe ejiji obere maka nwanyị
Ịhọrọ uwe ejiji maka ụmụ nwanyị, ndị na-edepụta ihe na-eme atụmatụ, nke mbụ, ịṅa ntị n'eziokwu ahụ bụ na ihe oyiyi ndị e kere eke na-emesi ike ịlụ nwanyị na nhazigharị. Ya mere, ọbụna ndị inyom kachasị ejiji na ejiji obere ego, ndị ọkachamara na-atụ aro ka ha tinye ma ọ dịkarịa ala otu n'ime uwe ndị dị ka uwe ejiji ejiji, uwe elu igwe ma ọ bụ ogologo cardigan. Ihe ndị dị otú ahụ na-abụ ihe ndabere nke uwe ejiji obere maka nwanyị. N'inwe akwa uwe ndị dị otú ahụ gị, ị ga-enwe obi ike na onwe gị kwa ụbọchị n'ọnọdụ ọ bụla.
Uwe ejiji ndị inyom - 34 foto nke ụdị kacha mma maka ọ bụla uto
Uwe akwa nwanyi
Miss Fofo Down Jaketị - na-ewu ewu na nkechacha ngwaahịa nke na-agba agba agba
Ndị inyom na-eji oge agba agba ndị inyom - Italy
Uwe agba aja aja - kacha mma ụdị nke nude shades
Okpokoro akpụkpọ ụkwụ
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri - ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi na-ewu ewu?
Mbido na okpomọkụ nke nwa
Brick na-acha odo odo
Chops na pan frying
Julia Wang - esi enweta aka?
A na-agbasa pelvis akụrụ na nwata
Iyi nke kpo dị mma na ihe ọjọọ
Ihe mgbochi n'ime ime ụlọ - olee otu esi ahọrọ onye ziri ezi?
Bọta butter na cosmetology
Ọsọ okpomọkụ na 2013
Agba nke 2018 na uwe - ụdị àgwà kachasị mma maka nsụgharị nke Pantone
Ogbe ahụ n'ụlọ
Kedu ụdị umu nwamba ịhọrọ maka ụlọ?
Ngwurugwu mmiri na-efe efe
Mmiri ara ehi - ọma na ihe ọjọọ
Ihe mgbagwoju anya mgbe mmiri ezì